निकुञ्ज सरोकार: वन्यजन्तुको त्रासबाट मुक्त गरौँ माडीलाई | चितवन पोष्ट दैनिक
निकुञ्ज सरोकार: वन्यजन्तुको त्रासबाट मुक्त गरौँ माडीलाई
२०७० माघ ७, मंगलवार ०३:४८ गते
चार गाविस रहेको चितवनको माडी क्षेत्रमा ६० हजारको हाराहारीमा जनसंख्या छ । चारै गाविसका जनता सधैँ वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने आक्रमणको त्रासमा बस्न बाध्य छन् । चितवन निकुञ्जको जंगल र सोमेश्वर पहाडले घेरिएको माडीमा हात्ती, बाघ, गैँडाजस्ता वन्यजन्तुले बर्सेनि सताइरहेका छन् ।
पुस १८ गते बिहीबार चितवन निकुञ्जले माडी अयोध्यापुरी गाविस वडा नं. ७ बाट एउटा बाघ नियन्त्रणमा लियो । एक महिनाअघि मंसिर १३ मा पनि सोही ठाउँबाट निकुञ्जले एउटा भाले बाघ नियन्त्रणमा लिएर जंगलमा छाडेको थियो । सोही भाले बाघ फेरि गाउँ छिरेको निकुञ्ज प्रशासनको आशंका छ ।
मंसिर १६ मै माडीकै बघौडा गाविसबाट निकुञ्जले अर्को बाघ नियन्त्रणमा लिएको थियो, जुन बाघ अहिले पनि निकुञ्ज मुख्यालय कसराको खोरमा रहेको छ । बिहीबार मात्रै बाघ नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्ज प्रशासनले जंगली हात्ती गाउँ पसेर दुःख दिएको गुनासो सुन्नुप¥यो । शुक्रबार राति अयोध्यापुरीमा पसेका चारवटा हात्तीले घरहरु भत्काएर धान खान थाले ।
तत्कालका यी घटनाले मात्रै होइन, माडी पहिल्यैदेखि नै जंगली जनावारबाट निकै आक्रान्त छ । गत वर्ष ‘ध्रुवे’ नामको जंगली हात्तीले माडीमा नै ठूलो आतंक मच्चायो । डेढ महिनाको फरकमा चार जनाको ज्यान लिएको ‘ध्रुवे’ मरे बाँचेको पत्तो छैन । तर, माडीमा अन्य हात्तीको बथान आउन कम भएको छैन ।
बाघ त यहाँ घरघरमा पस्छन् । दुई वर्षअघि पुस ४ मा बघौडा गाविस वडा नं. १ सिधुवाका नारायण चौधरीको धान गोदाममा बाघ आएर लुकेको थियो । नौ दिनसम्म गाउँमा डुलेको बाघ धान गोदाममा लुकेपछि निकुञ्जको टोली आएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । हात्ती र बाघजस्तै गैँडाबाट पनि माडीवासीलाई सधैँ त्रास रहने गरेको छ ।
गएको साउन ५ गते गैँडाले हान्दा माडी गर्दी गाविसका सोमलाल बोटेको ज्यान नै गयो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेलामा माडीमा जंगली हात्ती र भालुको त्रास थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेल भन्छन्– ‘संख्याका दृष्टिले वन्यजन्तु आक्रमणसँग जोडिएका धेरै घटना माडीमा नै हुन्छन् ।’
निकुञ्ज कार्यालय कसराबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बर्सेनि सरदर १२ जनाको ज्यान जाने गर्छ, त्यसमध्ये लगभग आधा माडी क्षेत्रका हुने गर्छन् । जनावरको आक्रमणमा परेर माडीको अयोध्यापुरी गाविसमा मात्रै वि.सं. २०५४ सालदेखि ६५ सालसम्म १९ जानको ज्यान गएको छ । बालीनालीमा हुने नोक्सानी पनि धेरै नै छ ।
तारबारले पनि रोकेन जनावर ः
जनावरले अति नै सताउन थालेपछि विद्युतीय तारबार गरेर सुरक्षित हुने उपाय रोजे, माडीवासीले । माडीमा बिजुली पुगेको छैन । सौर्य ऊर्जाको बिजुली प्रयोग गरेर विद्युतीय तारबार गर्न पनि तयार भए माडीवासी । यसको सुरूवात माडीको अयोध्यापुरी गाविसबाट भयो । अयोध्यापुरीमा १३ किलोमिटर विद्युतीय तारबार लगाइयो ।
तीन वर्ष लगाएर तारबार गर्ने काम ६७ सालको जेठमा सकियो । यो कामका लागि २९ लाख रूपैयाँ खर्च भयो । सुरूमा विद्युतीय तारबारको प्रभाव राम्रै देखियो । तर, वि.सं. २०६७ सालको हिउँदमा अयोध्यापुरीमा नै जंगली हात्तीले दुई जना र गैँडाले एक जनालाई मा¥यो ।
अहिले जंगली जनावरहरु गाउँ पस्ने माडीको पूर्व क्षेत्र प्याउली बगइदेखि पश्चिमी क्षेत्र वनकट्टा पाण्डवनगरसम्मको लगभग ५० किलोमिटर दूरीमा विद्युतीय तारबार भएको छ । रिउ नदीको किनार घेरेर लगाइएकोे तारबारले पनि माडीवासीलाई त्रासबाट मुक्त राख्न सकेको छैन । एक किलोमिटर तारबारका लागि श्रमदान र अनुदानको काठको मूल्य जोड्दा पाँच लाख रूपैयाँ लाग्छ ।
तारबारमा नियन्त्रित बिजुली छाडिएको हुन्छ । विजुली प्रवाह भएको तार छुँदा जनावरहरुलाई हल्का झट्का लाग्छ । त्यो झड्काले तर्सेर जनावर फेरि दोहोरिएर त्यस ठाउँमा नआउने देखिएको थियो । ठूला जनावरहरु हात्ती र गैँडालाई रोक्न विद्युतीय तारबार प्रभावकारी देखिए पनि बिस्तारै त्यसले काम गर्न छाड्यो ।
‘तारबारलाई राम्रोसँग स्याहार गर्नुपर्छ । घाँसले छोयो भने तारमा करेन्ट जान रोकिन्छ । करेन्ट नगएपछि भत्काएर जनावर छिर्छ’, माडी गर्दी गाविसअन्तर्गत रहेको पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमबान्त भुषालले भने । चितवन निकुञ्जअन्तर्गत २२ वटा मध्यवर्ती समिति छन्, जहाँ निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा बस्नेले प्रतिनिधि चयन गर्ने परिपाटी छ ।
ड्यामसहितको विद्युतीय तारबार प्रभावकारी ः
माडी कल्याणपुर गाविसको गोपालनगर, गौरीनगर र हरिनगरका बासिन्दाले अचेल वन्यजन्तुको त्रासबाट केही राहत पाएका छन् । रिउ खोलाको किनारबाट जंगली जनावरहरु गाउँ पस्दथे, जसलाई रोक्न पहिला सामान्य खालको विद्युतीय तारबार गरिएको थियो । यसले केही समय फाइदा भए पनि पछि तारबार नै भत्काएर हात्ती गाउँ छिरेर दुःख दिन थाल्यो ।
त्यसपछि कल्याणपुरका बासिन्दाले अर्कै उपाय निकाले । उनीहरुले रिउकिनारमा १० फिट अग्लो ड्याम (बाँध) लगाए, त्यसमाथि बल्ल विद्युतीय तारबार गरे । ड्यामको आडमा माछा पोखरी रहेको छ । ड्यामसहितको विद्युतीय तारबारको क्षेत्रमा सयभन्दा धेरै माछा पोखरीहरु रहेका छन् । सामान्य तारबारभन्दा अहिले यो प्रभावकारी देखिएको छ ।
रेवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुक्तराज लामिछाने भन्छन्– ‘एक त, जनावर ड्याम उक्लँदैन । उक्लिएमा पनि माथि गएपछि आउने विद्युतीय तारबारको झड्काले तर्सन्छ । तारबार नाघे पनि आडैमा रहेका माछा पोखरी पार गरेर गाउँ पस्न सक्दैनन् ।’ तर, यस्तो तारबार खर्चिलो भने छ । कल्याणपुरमा लगभग चार किलोमिटर तारबार गर्दा एक करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
रिउ खोलाको किनारैकिनार २५ किलोमिटर क्षेत्रमा ड्याम उठाएर विद्युतीय तारबार गर्दा जनावरको आक्रमणबाट माडी धेरै हदसम्म सुरक्षित हुन्छ । रिउको बाढी पनि गाउँ पस्न सक्दैन । यसले जनावर र डुबानबाट जोगाउने लामिछानेको भनाइ छ । तर, चितवन निकुञ्ज वा स्थानीय सरकारी निकायको प्रयास र बजेटले यो काम पूरा हुन सम्भव भने छैन ।
दीर्घकालीन यस्ता योजनाका साथै जनावरको आक्रमणबाट जोगिने अल्पकालीन योजना ल्याउन स्थानीय माग गर्छन् । निकुञ्ज प्रशासनले जनावरहरुको स्वभावका बारेमा स्थानीयलाई सचेत गराउन सुरू गरेको सहायक संरक्षण अधिकृत पौडेलले बताए । निकुञ्जको जंगलसँग जोडिएका घर र जंगलतर्फ मुख फर्काएर बनाइएका गोठले बाघ गाउँमा लोभिएको छ ।
‘जंगलसँग जोडिएका घरगोठ छन् । बाघ ओहोरदोहोर गर्दा नै घरपालुवा जनावर देख्छ । जनावरमा लोभिएको बाघले गाउँ छाड्न मान्दैन । यस्ता कारणले पनि समस्या आएको छ’, सहायक संरक्षण अधिकृत पौडेलले भने । मान्छेसँगै जनावर पनि बढेकाले निकुञ्जले समय सुहाउँदो व्यवस्थापन योजना ल्याउनु पर्ने पाँच पाण्डव मध्यवर्तीका अध्यक्ष भुषालको माग छ ।